မြန်မာနိုင်ငံတွင် ချက်ခြင်းပင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် မလေးရှားတို့ကို မပာာသီယာတိုက်တွန်း
(Bernama News မှ3Nov 2011 ရက်စွဲပါ “Invest in Myanmar Now, Tun Mathathin Urgse Malasians” သတင်းကို YC မှဘာသာပြန် ဆိုသည်)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် မလေးရှားနိုင်ငံသားများကို တိုက်တွန်းလိုက်သော ယခင်ဝန်ကြီးချုပ် မပာာသီယာက အကယ်၍သာ ယခု အချိန်တွင် မပြုလုပ်ပါက အခြားနိုင်ငံများမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ နောက်တွင် ကျန်ရစ်တော့ မည့်အလားအလာရှိကြောင်း သတိပေးပြောဆို လိုက်ပါသည်။
“မြန်မာတွေ ပိုမိုပျော့ပြောင်းလာပြီလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ပိုပြီး ပွင့်လင်းတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လာအောင် အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ဖို့ နိုင်ငံကို ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ” ပာု မပာာသီယာက Bernama News သို့ပြောကြားသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်ပောာင်း ဒေါက်တာ မပာာသီယာသည် မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရရုံးစိုက်ရာ နေပြည် တော်သို့ ဗုဒ္ဓပာူးနေ့မနက် လေကြောင်းခရီးဖြင့် ထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်သည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် တစ်နာရီကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအပြီးတွင် ဒေါက်တာ မပာာသီယာသည် မြန်မာအစိုးရ စက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းနှင့် ဆက်လက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီးနောက် မလေးရှားနိုင်ငံ သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့သည်ပာု သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကို အာဆီယံအဖွဲ့ထဲသို့ ခေါ်ယူခဲ့မှုအတွက် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ယခင်ဝန်ကြီးချုပ်က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် “မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျပ်ငွေကိစ္စ၊ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် ဆီအုန်းနှင့် ရာဘာစိုက်ပျိုးမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးကိစ္စများ အပါအဝင် ကိစ္စရပ်များစွာကို ပြောဆိုခဲ့သည်” ပာု Bernama News သို့ ပြောကြားသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် ပိုမိုရင်းနှီးသော ဆက်ဆံမှု ထူထောင်ရေးနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ မည်သို့တိုးတက်ခဲ့ပုံကို စိတ်ဝင်စားကြောင်း ပြသခဲ့သော မြန်မာ သမ္မတက မြန်မာနိုင်ငံတွင် မလေးရှားတို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည့် ဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာ များကိုလည်း ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့သည်ပာု သိရသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်ပောာင်းက ဆက်လက်၍ “ယခုတွေ့ဆုံမှုသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အပြုသဘောဆောင်ကြောင်း၊ သို့သော် တရားဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ် သွားရောက်ခြင်း မပာုတ်ကြောင်း၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် ကိစ္စများကို မလေးရှားအစိုးရထံ လက်ဆင့်ကမ်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း” ပြောကြားသည်။
မနေ့က ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော ဝန်ကြီးချုပ်ပောာင်း မပာာသီယာက မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကမ္ဘာကြီးတစ်သားတည်း ဆက်စပ်ကျယ်ပြန့်လာမှု (Globalization) နှင့် အလယ်အလတ် ပျော့ပြောင်းလာမှု(Liberalization) အကြောင်း ပောာပြော၍ အပြီးတွင် မြန်မာစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည် ပာု ပြောကြားသည်။
မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များက သက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းများ မေးမြန်းသည့်အပြင် မလေးရှားတွင် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော အရာများစွာကိုလည်း သိရှိလိုကြသည်ပာု မပာာသီယာက ဆိုပါသည်။
ဒေါက်တာ မပာာသီယာသည် ယခင်က တွေ့ဆုံခြင်းမရှိသော၊ ယခုအခါ လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်သော မြန်မာ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း မလေးရှားသို့ မပြန်မှီ ပိာုတယ်သို့ ဖိတ်ကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်ပာု သိရှိရသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, November 05, 2011 Links to this post
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာအို၊ နီပေါ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ မြန်မာ သို့ ထွက်ခွာ
( Yimhva သတင်းမှ 3.Nov.2011 ရက်စွဲပါ "CPC delegation visit Lao,Nepal,Bangladesh,Myanmar" သတင်းကို yangonchronicle မှ ဘာသာပြန်ဆိုသည်)
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ၏ နိုင်ငံရေး ပေါ်လစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်နှင့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ဘီဂျင်းမြူနီစပယ် ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်သူ 'လူကျိ' ခေါင်းဆောင်သော ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် လာအို၊ နီပေါ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံများသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး သွားရောက်ရန်အတွက် ဘီဂျင်းမှ ကြာသပတေးနေ့တွင် ထွက်ခွာသွားသည်။
ယခုခရီးစဉ်ကို လာအို ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးပါတီ၊ နီပေါအစိုးရ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အာဏာရ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီတို့က အသီးသီးဖိတ်ကြားခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
ဦးပိုင်ဆန်အ၀ယ်တော် ဆန်ဖိုးငွေ သိန်းထောင်ချီမရှင်းနိုင်သဖြင့် တိမ်းရှောင်
မြန်မာ့တပ်မတော်၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုံ ကော်ပရေးရှင်းဖြစ်သည့် ဦးပိုင်မှဆန်အ၀ယ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦိးသည် ပေးချေရန် ရှိသည့် ဆန်ဖိုးငွေများကို ပေးချေခြင်းမရှိဘဲ တိမ်းရှောင်သွားကြောင်း ဘုရင့်နောင် အသောကလမ်းမှ ဆန်ပွဲရုံပိုင်ရှင် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိ ပုဂ္ဂိလ်သည် ပြည်ပတင်ပို့မည့် ဆန်အ၀ယ်တော်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေရာမှ တဆင့်တက်ပြီး ကားအရောင်းအ၀ယ်ကို ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်ရာတွင် ဆန်ဘိုးငွေများဆုံးရှုံးသွား၍ ဆန်လာသွင်းသည့်သူများကို ငွေမချေနိုင်တော့ဘဲ ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့မှ စတင်တိမ်းရှောင်သွားသည်ကို ဗုဒ္ဒဟူးနေ့မှ ဆန်ပွဲစားများသိရှိကြကြောင်း ဦးပိုင်သို့ ဆန်ဝယ်ယူတင်သွင်းနေသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“အရင်က ဆန်ကားရောက်တာနဲ့ ငွေချေတာ အခုငွေမချေဘဲ လူပျောက်သွားတာ ငွေဘယ်လောက်လဲ ဆိုတာတော့ လောလောဆယ်စုလို့ မရသေးဘူး သိန်းထောင်ချီိနိင်တယ်” ဟု အထက်ပါ ပုဂ္ဂိလ်က ဆိုသည်။
သက်ဆိုင်ရာမှ သင်္ဘောတင်သာမက နယ်စပ်ကပါ ဆန်တင်ပို့ရောင်းချခွင့် ပြူလိုက်သဖြင့် ဆန်အရောင်းအ၀ယ် ကောင်းရမည့်အချိန်တွင် ဦးပိုင်ကို ဆန်တင်သွင်းသူများကလည်း ငွေရှင်းမနိုင်၊ ၎င်းတို့အောက်ကပွဲစားကလည်း ငွေမရှင်းနိုင်၊ ပွဲစားငွေမချေနိုင်သဖြင့် ဆန်စက်သမား ငွေမလည်ပတ်နိုင်ဘဲ တောင်သူများအထိ အဆင့်ဆင့်ထိခိုက်က ကောက်သစ်ပေါ်ချိန်တွင် ဆန်အရောင်းအ၀ယ် တုံ့ဆိုင်းသွားရကြောင်း ပြည်ပသို့ဆန်တင်ပို့နေသူတစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
ဦးပိုင်း၏ ဆန်စပါးဝယ်ယူမှုစနစ်သည် လူတစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် လူသုံးလေးယောက်က ငွေသိန်းသုံးလေး သောင်းချီပြီး စပါးတင်း သိန်းပေါင်း ၁၀သိန်း၁၅သိန်း ၀ယ်ယူသော စနစ်ဖြစ်သဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်များ အချိန်မရွေး ဖောက်ပြန်နိုင်ကြောင်း ဆန်စပါးဝယ်ယူရာတွင် ငွေကြေးအားဖြင့် တင်း၁၀၀ ကို ကျပ်လေးငါးထောင် အဟဖြင့်ပင် ကိုယ်ကျိုးရှာ၍ ရကြောင်း မြောင်းမြမြို့မှဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
“အခုဖြစ်တာ လူကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတာထက် လုပ်တဲ့စနစ်ကြောင့်ဖြစ်တာ လက်ဝါးကြီးအုပ်စနစ်ကြောင့်ဖြစ်တာ”ဟု ဆန်ရောင်းဝယ်ရေး အတွေ့အကြုံနှစ်၂၅နှစ်ရှိ အထက်ပါ ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်က ဆိုသည်။
DV ပေါက်သည်ဟု လိမ်လည်ငွေတောင်း သူ များ ပေါ်ပေါက်နေ
﻿အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခွင့် ဗီဇာကံစမ်းမဲ အစီစဉ် တစ်ခုဖြစ်သည့် The Diversity Visa - DV ကံစမ်းမဲ ပေါက်သည် ဟုဆိုကာ ငွေတောင်းစာ အီးမေးလ်များပို့ပြီး လိမ်လည်မှု များရှိနေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမေရိကန် သံရုံးမှ ဒုတိယကောင်စစ်ဝန် Daniel Jacobsကပြောသည်။ ယင်းကဲ့သို့ လိမ်လည်နေ သူများကို အမေရိကန် အစိုးရ အနေဖြစ် စိစစ်အရေးယူမှုများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ၄င်းကဆက်လက် ပြောကြား သည်။ “DV လျှောက်ထားတဲ့ သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ အခုလိုမျိုး လိမ်လည်စာတွေ ရောက်လာရင် သံရုံးကို ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြား ပေးပါ”ဟု ၄င်းကဆိုသည်။ DV လျှောက်ရန်နှင့် ပေါက်မပေါက်သိရန်အတွက် ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာ တစ်ခုတည်း သာထား ရှိထားပြီး ယင်းဝက်ဆိုက် ကသာ အစအဆုံး လုပ်ဆောင် ပေးကြောင်း၊ ယင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ www.dvlottery.state.gov ဖြစ်သည်။
ယင်းကဲ့သို့လိမ်လည် ခံခဲ့ရ သူများကို ဖော်ပြမပေးခဲ့ သော်လည်း လိမ်လည်ခံ လိုက်ရသူများ အမှန်တကယ်ရှိကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ DV လျှောက်ခြင်း၊ ပေါက်မပေါက်သိခြင်း တို့ကို အထက်ပါဝက်ဘ်ဆိုက်၌သာ လုပ်ဆောင်ရ သည်ဖြစ်သည့်အတွက် အခကြေးငွေ လုံးဝမယူထားကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။DV ပေါက်ပြီး အမေရိကန်သံရုံးမှ အင်တာဗျူး ခေါ်ယူပြီးမှသာလျှင် ဗီဇာကြေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၄၅ ဒေါ်လာပေး သွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗီဇာကြေးတစ်ခုတည်း ကိုသာ အမေရိကန်အစိုးရမှကောက်ခံပါကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။ DV သည်အမေရိကန် နိုင်ငံ၌ နေထိုင်ခွင့်ပြု သည်မှအပ အမေရိကန် အစိုးရက မည်သည့် ထောက်ပံ့မှုကိုမျှ ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ လိမ်လည်သူများကမူ နေစရာနှင့်အလုပ်ကိုပါ ကူညီပေးမည်ဟု ရေးသားလိမ်လည် လေ့ရှိကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။ DV ကံစမ်းမဲအဖြစ် တစ်နှစ်လျှင် လူဦးရေ ၅သောင်းကို အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခွင့်ပြုရာ နှစ်စဉ်မြန်မာနိုင်ငံမှ ၂၂၀ ခန့် မဲပေါက်လေ့ ရှိသည်ဟုVenus News Journal တွင်ဖော်ပြပါရှိထားသည်.။
မုံရွာ အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက် မြန်မာပြည်ရဲ့ ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသ ကို အလည်ဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်ထဲက အနီရောင်မုန်တိုင်း ငယ်မိုးဟာ လူနေရပ်ကွက်တွေကို ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ မိုးရွာသွန်းမှုများပြီဆိုရင် ရေ ကြီးရေလျှံမှုဒဏ်ကို နှစ်စဉ်ခံရတဲ့ မြို့ပေါ်လူနေရပ်ကွက်များကတော့ နန္ဒဝန်ရပ် နယ်မြေအမှတ်(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅) အေးရိပ်သာလမ်း၊ သလ္လာမြို့သစ်ရပ်ကွက် ပညာကော လိပ်အနီး သာစည်လမ်း၊ ရတနာပုံ ရပ် နယ်မြေအမှတ် (၁၀) ဓမ္မပါလ ကျောင်းတိုက်အနီး အောင်သပြေ လမ်းနဲ့ လယ်တီရပ်ကွက် သုခဝတီ ကျောင်းအနီး ကွက်သစ်တို့ဖြစ် တယ်။ "ဟိုအရင်တုန်းက ကျောက္ကာ တောင်ရိုး (မ)ဘက်ကကျလာတဲ့ ရေတွေဟာ 'ဦးပေါကြည်'ချောင် ရိုး အတိုင်း၊ ချင်းတွင်းမြစ်ထဲကို စီးသွားတယ်။
အခုဟာက ချင်းတွင်း မြစ်ထဲကို စီးဝင်ရာလမ်းကြောင်း ဖြစ်တဲ့ ကန်သာယာရေကန်ကြီးကို ပိတ်ဆို့ပြီး ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း တွေလုပ် ကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရေထွက်လမ်းမရှိဘဲ ရေတွေကအိပြီး ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်တွေကို ရေမြုပ်ကုန်တာပါ။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး က တစ်နှစ်ကို လေးငါးကြိမ် အ နည်းဆုံးတွေ့ရတယ်လို့" ရတနာပုံ ရပ် ကွက်၊ အောင်သပြေလမ်း၊ လမ်း သွယ် (၄)နေ ဒေသခံတစ်ဦးက လွတ်လပ်စွာပြောပြပါတယ်။
လယ်တီရပ်ကွက် မြောက်ပိုင်း သုခဝတီကျောင်းအနီးနေ ဒေသခံ တစ်ဦးကတော့ "မြို့ထဲလမ်းတွေ ပေါ်ရေကြီးရေလျှံတယ်ဆိုတာက နာရီပိုင်းနဲ့ပြီးသွားတယ်။ ကျွန်တော် တို့ ပိုင်းရေဝင်ရင် အနည်းဆုံးဆယ် လေးငါးရက်ကြာတယ်။ ရေကျပြီဆို တာတောင် အိမ်ထဲမှာ ၂ပေခွဲ ၃ပေ လောက်ကျန်တယ်။ ကိုယ့်ကျန်းမာ ရေး ကိုယ်ဂရုစိုက်ပြီးနေရတယ်။ နေရေးထိုင်ရေးနဲ့ ချက်ပြုတ်စား သောက်ရေး အလွန်ခက်ရပါတယ်" လို့ ဆိုပါတယ်။ ရေကြီး ရေလျှံပြီး၊ လူနေရပ် ကွက်များ ရေနစ်မြုပ်မှုဘေးအန္တ ရာယ်ကြုံရသော်လည်း လူသေဆုံး ခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပျက်စီးဆုံးခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်ဟု ENVOY News Journal တွင်ဖော်ပြပါရှိပါသည်.။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားမှ အထူး ကိုယ်စားလှယ်တော်များ ဆက်တိုက်ရောက်ရှိ
နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း၊ ၅နာရီ မိနစ် ၃၀ အချိန်မှာ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးဆောင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်မှာ လာရောက်တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခြံရှေ့ကို ညနေ ၅နာရီ ၀န်းကျင်လောက်မှ အရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒဲရက်မစ်ချဲလ်နှင့် အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုက်ကယ်ပိုစနာတို့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၄)ရက်နေ့ ညနေ(၂)နာရီခွဲအချိန်တွင် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၏ နေအိမ်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။
သတင်း၊ဓာတ်ပုံများအတွက် မြစ်မခ မီဒီယာ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
စစ်တပ်မှ အမျိုးသမီးငယ် ၃ဦးကို အဓမ္မကျင့်သတ်ဖြတ်
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့နယ် နမ့်ဖဲပါရွာမှ အမျိုးသမီးငယ် ၃ဦးအား ခလရ(၂၉၀) တပ်ရင်မှူး လက်အောက်ခံတပ်များမှ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟု ဒေသခံ တစ်ဦးက ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
“ရွာက တရုတ်ရွာဗျ။ အသတ်ခံရတာကလည်း တရုတ်အမျိုးသမီးလေးတွေပါ။ မုဒိမ်းကျင့်ထားတဲ့ လက္ခဏာလည်း တွေ့ရ တယ်လေ။ ရွာကလူတွေက ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ရဲစခန်းတိုင်ဖို့ လုပ်ကြသေးတယ်။ တိုင်ရင် စစ်တပ်က လာနှိပ်စက်ဦးမယ်ဆိုပြီး မတိုင် ဖြစ်တော့ဘူး။”ဟု ၎င်းဒေသခံက ဆက်ပြောသည်။
အသတ်ခံရသော အမျိုးသမီးလေးများမှာ အသက် ၁၇နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးကြောင်းလည်း သိရသည်။
၎င်းစစ်တပ်သည် ၂၅ရက်နေ့က ထိုနမ့်ဖဲရွာ မရောက်မှီ စစ်ကြောင်းချီရာ လမ်းပေါ်ရှိ နမ့်တောင်နှင့် မုန်းပေါ်ရွာကြားရှိ ကောင်း ခါးရွာကိုလည်း ၀င်ရောက်ကာ ရွာထဲရှိ ကြက်များကို ယူဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။
“အိမ်တိုင်းကိုဝင်ပြီး မွေးထားတဲ့အကောင်တွေ ယူတာ။ အိမ်တအိမ်ကတော့ မီးဖွားပြီးစ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထဲနေတာ။ ကြက်မွေးထားတာ မရှိဘူးလို့ပြောတော့ တံခါးအတင်းဖွင့်ပြီး အိမ်ထဲက ပစ္စည်းတွေယူ သွားတာပဲလေ။”ဟု ရွာခံတစ်ဦးက ပြော သည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလကလည်း မြစ်ကြီးနား-ဗန်းမော်သွား ကားလမ်းအနောက်ဖက်ခြမ်း ရှဒပါရွာတွင် တရုတ်အမျိုးသမီး ၃ဦးအား အစိုးရစစ်သားများက အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ကြသည်။
စက်တင်ဘာလမှစ၍ ထိုးစစ်များကြောင့် လားရှိုး၊ ကွတ်ခိုင်၊ မူဆယ်ဒေသများရှိ ဒေသခံများမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ကို ခံနေကြရသည်။
(ရင်သွေးငယ်အတွက် ခံစားနေရသော ကျောင်းသား မိဘတစ်ဦး)။
သတင်း.. Maukkha Education Magazine
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, November 04, 2011 Links to this post
အစိုးရစစ်တပ်က နို့မဖြတ်ရသေးသည့် နို့စို့အရွယ်ကလေးမိခင် ကချင်အမျိုးသမီးတဦးအား ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားပြီး (၇)ရက်မြောက်
ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားသည့် တပ်မှာ ခမရ (၃၂၁) လက်အောက်ခံ မို့ဘွမ်ရှေ့တန်းစခန်း
ကျန်ခဲ့တဲ့ နို့စို့အရွယ် သမီးငယ်
အပြစ်မဲ့ သမီးငယ် လွမ်းနော၏ သနားစရာအမေကိုစောင့်မျှော်နေလျက်
အေးဆေးစွာနေထိုင်နေတဲ့ မိသားစုနေအိမ် ခုတော့ပူးဆွေးမှုများစွာနဲ့
ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံထားရသည့် နို့စို့အရွယ် ကလေးမိခင် ဒေါ်ဆွမ်လွတ်ရွယ်ဂျာ
၂၀၁၁ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ (၂၈)ရက်နေ့ ညနေ ၃နာရီကျော်
မိုးမောက်မြို့နယ်။ လွယ်ဂျယ်မြို့နယ်ခွဲ၊ ခိုင်ဗန်ကျေးရွာ။ ဦးမရူဒေါင်လွမ်း. ပြောင်းဖူးခင်း၊
(၂) ဦးမရူဒေါင်လွမ်း- အသက် (၃၁)။ ဒေါ်ဆွမ်လွတ်ရွယ်ဂျာ.ခင်ပွန်း
(၃) ဦးမရူဇေဒေါင် - အသက် (၇၀)နှစ် ဦးမရူဒေါင်လွမ်း.ဖခင်
၂၀၁၁ခုနှစ်။ အောက်တိုဘာလ (၂၈)ရက်နေ့က ဒေါ်ဆွမ်လွတ်ရွယ်ဂျာနှင့် အတူတကွ သူမ၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးမရူဒေါင်လွမ်း။ သူမ.ယောက်ခထီး ဦးမရူဇေဒေါင်တို့သည် ခိုင်ဗန်ကျေးရွာအစွန်။ မို့ဘွမ်တောင်ခြေရှိ ၎င်းတို့ ပြောင်းဖူးခင်း ပြောင်းဖူးရိတ် နေရာသို့ တပ်မတော်စစ်သား(၃)ဦးရုတ် တရက်ရောက်ရှိလာပြီး သေနတ်နဲ့ ချိန်ရွယ်ကာ ဘာမှပြန်မပြောဖို့နဲ့ ခူး၍ထားသည့် ပြောင်းဖူးများကို သိမ်း ခိုင်းသည်၊ ထို့နောက် ၎င်းတို့ (၃)ယောက်အား ပြောင်းဖူးများ တောင်ထိပ်ရှိ စစ်တပ်သို့ လိုက်ထမ်းပို့ရန် ပြောသည်၊ ဦးမရူဇေဒေါင်နှင့်သူ့သား ဦးမရူဒေါင်လွမ်းတို့အား ကေအိုင်အေစစ်သား ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးမေးမြန်းသည်။ ဦးမရူဇေဒေါင်တို့ သားအဖမှလည်း မိမိတို့ KIA စစ်သားများ မဟုတ်ကြောင်း ပြန်ပြောဆိုသည်၊ အစ ပထမ ဦးမရူဇေဒေါင်တို့ သားအဖအား မချည်ပါ၊ ပြောင်းဖူးခင်း အစွန်နားရောက်တော့ ကေအိုင်အေ စစ်သားတွေ လုံခြုံရေးလာယူစဉ်က တူးသွားသည့် ကတုတ်ကျင်းကို တွေ့သည့်အခါ မင်းတို့ကအိုင်အေ ပြည်သူ့စစ်ပဲ ဟုဆိုကာ မာန်မဲသည်။ သတ်ပစ်မည်ဟု ပြောသည်။
ထို့နောက် သားအဖနှစ်ယောက်အား ပလိုင်းကြီးနှင့် အတူတူချည်သည်၊ ထိုနေရာ၌ နောက်ထပ်စစ်သား (၃)ဦးကစောင့်နေသည်၊ ထို့နောက်မို့ဘွမ်စစ်တပ် တောင်ကုန်းဘက်သို့ ထွက်လာရာလမ်းသို့ ဒေါ်ဆွမ်လွတ်ရွယ် ဂျာက ထွက်ပြေးကြရအောင်ဟု သူမခင်ပွန်းနှင့် ယောက္ခထီးကို တိုင်ပင်သည်၊ နောက်တော့ သူမခင်ပွန်းနှင့် ယောက္ခထီးကို စစ်သားတွေရဲ့ ရှေ့မှာ လျှောက်ခိုင်းသည်။ ဒေါ်ဆွမ်လွတ်ရွယ်ဂျာနှင့် သူမခင်ပွန်းတို့ကား စစ်သားတွေခြား သွားသည်၊ လျှောက်လာရင်း ဦးမရူဇေဒေါင်တို့ သားအဖကတော့ ထွက်ပြေးကြဖို့ တိုင်ပင်ပြီး လက်ချည် ထားသည့် သားကို ဖက်ကာစစ်သားတွေ ရှေ့တင်မျက်စိစုံမှိတ်ကာ လျှက်တပြက်အတွင်း ထွက်ပြေးသွားသည်၊။ ထွက်ပြေးသွားစဉ် သေနတ်အော်တိုဆွဲကာ (၂)ခေါက်လိုက်ပစ်သည်။ မထိပဲ လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်၊ သို့သော် စိတ်မကောင်းစွာဘဲ ဒေါ်ဆွမ်လွတ်ရွယ် မထွက်ပြေးနိုင်ပဲ စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားခြင်း ခံရသည်၊ သေနတ်နဲ့ပစ်တဲ့ အချိန် ညနေ ၄နာရီခန့်ရှိပြီး။
အောက်တိုဘာလ(၃၀)ရက်နေ့ကလဲ သူမအားနေပူဆာလှုံခိုင်းသည်၊ သူမနေပူဆာလှုံနေ စဉ် ကြောက်ရွံ့ နေသူတဦး ထိုင်နေသကဲ့သို့ ကျုံ့ကာခေါင်းငုံ ထိုင်နေသည်ကို တွေ့နေရသည်၊ ထိုသို့ထိုင်နေစဉ် ဘေးကဖြတ်သွား သည့်စစ်သားတွေက တို့လိုက်။စလိုက်။ဖက်လိုက်လုပ်သည်၊ စစ်သား၂ယောက်ကသူမ အားထူပြီး လမ်း ခေါ်တွဲလျှောက်သည်ကိုလဲ မြင်ရသည်၊ သူမသည် လမ်းကောင်းကောင်း မလျှောက် နိုင်တော့သည့် ပုံမျိုး တွေ့ရသည်၊ အောက်တိုဘာ(၃၀)ရက်နေ့အထိသူမ. မူလအ၀တ်အစား ၀တ်သေးသည်၊ အောက်တိုလဘာ(၃၁)ရက်နေ့တွင် စောင့်ကြပ်လေ့လာနေသည့် ဒေသခံအမျိုးသမီး အဖွဲ့မှလဲ မို့ဘွမ်တပ်စခန်း နားသို့သွားကာ အနီးကပ်စောင့် ကြည့်နေခဲ့သည်၊ ထိုနေ့တွင် သူမအား အပြင်သို့ ခေါ်ထုတ်လာသည်၊ သို့သော် သူမအား အရင်အ၀တ်အစားများ ဝတ်ဆင်လျှက်မဟုတ် တော့ဘဲ။ စစ်အင်္ကျီဝတ်ထားသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်၊ ညနေပိုင်း ၄နာရီခန့်တွင် သူမအား စစ်သား(၄)ယောက်က စခန်းတွင်းတူးထားသည့် လှိုဏ်ခေါင်းပေါက်ထဲဆွဲခေါ် သွားကြသည်ကို နောက်ဆုံးတွေ့မြင်ခဲ့သည်၊။
မာန်အောင်မြို့ နယ်တွင် ပိုစတာကမ်ပိန်းတစ်ခု လှုပ်ရှား
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မာန်အောင်မြို့တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ပိုစတာကမ်ပိန်းတစ်ခုကို နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“မနေ့က မနက်စောစော ၆ နာရီကျော်လောက်မှာ မြန်အောင်မြို့နယ် မြို့ သစ်ဈေးနားမှာ ပိုစတာတစ်ခု ကပ်ထားတာကို တွေ့ရတယ်” မာန်အောင်မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
“မာန်အောင်မြို့စာတိုက်ရုံးနားမှာ ပိုစတာ တစ်ခု၊ မိခင်နဲ့ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးရုံးမှာ ပိုစတာ တစ်ခုနဲ့ မော်တော်ကားဂိတ်နားမှာလည်း ပိုစတာတစ်ခု အပါအဝင် မာန်အောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာ ပိုစတာ ၇ခု ၈ ခုလောက် ကပ်ထားတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်” လို့ မာန်အောင်မြို့ခံတစ်ဦးက ဘားမားဗီဂျေ ကို ပြောပါတယ်။
အဆိုပါ ပိုစတာ ရဲ့ အပေါ်ဆုံးမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းကျ သံဃာတော်တွေရဲ့ပုံ ပါတယ်။အဲဒီအောက်မှာ “မြန်မာပြည်သူများဘက်တွင် ကမ္ဘာ့ပြည်သူများ ရပ်တည်နေကြသည်။” ဆိုတဲ့ စာတမ်းပါတယ်။ အဲဒီအောက်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ယောက်ျား၊ မိန်းမတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေပါတယ်။ အဲဒီအောက်မှာ “တရားမျှတမှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ချက်ချင်းလွှတ်” ဆိုတဲ့စာတမ်းပါတယ် လို့ မာန်အောင်မြို့ခံတစ်ဦးက ဘားမားဗီဂျေ ကို ပြောပါတယ်။ဈေးကိုလာတဲ့ပြည်သူတွေက ဈေးရှေ့ မှာ ကပ်ထားတဲ့ပိုစတာကို စိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှုနေကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် မနက် ၇ နာရီ ဝန်းကျင်လောက်မှာတော့ ရဲတွေရောက်လာပြီး ပိုစတာတွေကို လာသိမ်းသွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အခု ပိုစတာကမ်ပိန်းကို ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကနေ လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
“နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွတ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒဟာ လူအများစုမှာ ရှိနေကြပါတယ်။ အဲဒီဆန္ဒပေါ်မှာ လူတစုကနေ လှုပ်ရှားပြီး အကောင်အထည်ဖော်လိုက်တာဖြစ်တယ်” လို့ မာန်အောင်မြို့ခံတစ်ဦးက ဘားမားဗီဂျေ ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
သတင်း... (Burma VJ Media Network)
အကြွေးရှင်နဲ့ ဥက္ကဋ္ဌပေါင်းပြီး လယ်ယာမြေကို မတရားသိမ်းဆည်း
အကြွေးရှင်နဲ့ ဥက္ကဋ္ဌပေါင်းပြီး လယ်ယာမြေကို မတရားသိမ်းဆည်းကြွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြွေးရှင်ဦးသန်းလှက ကျွန်တော့်လယ် ၅ဧကကိုတောင်းပါသည် ။ ကျွန်တော် ကမပေးနိုင်သေးကြောင်းပြောခဲ့ပါသည်။ မပေးရ မလား ဆိုပြီး ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်အောင်နှင့်ပေါင်းပြီးဦးမြင့်အောင် က ကျွန်တော့အိမ်ကိုလာပြီး “ငွေ ၅ သိန်းနဲ့ နားကပ် တရံပေးမင်းလယ် ၅ဧက ကိုလဲ ဦးသန်းလှ ကို ကြွေးအတွက်ပေး လိုက်ပါ“ လို့ပြောသည်။
ကျွန်တော်က အခုမရှိသေးလို့မပေးနိုင်သေးဘူးလို့ ပြောလိုက်ပါသည်။ဦးမြင့်အောင်က ကျွန်တော့်ကို မပေးရင် မင်းလယ် ၅ဧက ကို သိမ်းမယ်လို့ပြောပြီး တစ်ပတ်အကြာမှာ စာထွက်ပြီး သိမ်းခဲ့ပါသည်။ အဲဒီနောက်ြ မို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသောင်းကို ကျွန်တော် တိုင်ကြားခဲ့ပါသည်။ အရေးမယူပါဘူးခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌကို ကျွန်တော်နောက်ထပ် တိုင်ကြားခဲ့ ပါသည်။ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌကလည်းအရေးမယူခဲ့ပါဘူး ။
အဲဒီနောက် ကျွန်တော်(၂၅ရက်၆လပိုင်း၂၀၁၀ခုနှစ် ) ရန်ကုန်တိုင်းမှူးဦးဝင်းမြင့်ထံသို့တိုင်ကြား ခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်း မှူးထံမှ ခရိုင်ကနေ ပြီး (၁၆ရက်၉လ၂၀၁၀ခုနစ်) ခရမ်းမြို့နယ်မရကဥက္ကဋ္ဌထံသို့ စာရောက် ခဲ့ပါသည်။
အဲဒီနောက်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌကို ဘယ်အချိန်စစ်ဆေးတယ်ဆိုတာ မသိပါဘူး။ကျွန်တော်၂၉ရက် ၂၀၁၀ခုနစ်မှာ ကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီး စစ်ဆေးခဲပါသည်။ကျွန်တော်ပြတဲ့ အသိသက်သေတွေကို ၁လ ၂၀၁၁ ခုနစ်ကနေခေါ်ပြီး စစ်ဆေးပါသည်။နောက်၁လ ပိုင်း၆ရက်နေ့က လက်မှတ်ခေါ် ထိုးခိုင်းပါသည်။
ကျွန်တော့်စစ်ချက်တွေကို ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါသည်။ ကျွန်တော်ထွက်ဆိုတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါ ကြတော့အတွင်းရေးမှူးဦးဝင်းကြည်က ဒါဆိုရင် ပြန်ပြောပါလို့ ပြောပါသည်၊ ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ စကားတွေကို ပြန်ပြီး ထွက်ဆိုခဲ့ပါသည်။
အဲဒီစစ်ချက်တွေ (၉လ၊၁၀လ ) ရှိပါပြီ အခုအချိန်ထိဘာမှ အဖြူ အမဲမသိရသေးပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာကဆောင် ရွက်ပေးပါရန် ကျွန်တော်အခုတိုင်ကြားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(The Diplomat မှ 2nd October, 2011 ရက်စွဲပါ "Burma's Opium Addiction" သတင်းကို yangonchronicle မှဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ပလောင်တိုင်းရင်းသားတို့၏ ဌာနေတွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု ကြီးထွားလျက် ရှိသည်။ ထိုအချက်ကို Plaung Women's Organization မှ ယခင်လက ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာတစ်စောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ အမှန်စင်စစ် ဒေသအာဏာပိုင်များသည် ထိုပြဿနာကို သိရုံသာမကဘဲ ဒေသတွင်း ဘိန်းကုန်သွယ်မှုကို ထိထိရောက်ရောက် အကာအကွယ်ပေးကာ အားပေးမြှင့်တင်လျက် ရှိသည်။
နမ့်ခမ်းမြို့နယ်အတွင်း ၁၅ ရွာရှိ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုသည် လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်အတွင်း ၇၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာခဲ့သည်ဟု PWO အုပ်စုက အစီရင်ခံ တင်ပြထားသည်။ အဆိုပါဒေသတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ဘိန်းစိုက်ဧရိယာ ၆၁၇ ဟက်တာမျှသာ ရှိရာမှ ယခုနှစ်တွင် ၁၁၀၉ ဟက်တာသို့ တိုးပွားလာသည်ဟု မျှော်လင့်ရပါသည်။ ယခင်က ဘိန်းစိုက်ပျိုးခြင်း မရှိခဲ့သော ၁၂ ရွာခန့်သည်လည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ စတင်စိုက်ပျိုးလာခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ပလောင်အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း မူးယစ်ဆေးစွဲမှု ပြဿနာသည်လည်း ပိုမိုဆိုးရွားလျက်ရှိသည်။ ကျေးရွာတစ်ရွာတွင် အသက် ၁၅နှစ် အထက် ယောင်္ကျားလေးများ၏ ၉၁ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မူးယစ်ဆေးစွဲနေသည်ကို PNO အုပ်စုကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို့ မူးယစ်ဆေးစွဲမှုသည် အိမ်တွင်းရေး ပြဿနာ အပါအဝင် ရာဇဝတ်မှုများကို ပိုမိုဖြစ်ပွားစေလျက်ရှိပါသည်။
ယင်းသို့ ဒေသတွင်း ဘိန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပြန်လည်အသက်ဝင် ရှင်သန်လာခြင်းအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ဗဟိုအစိုးရကို PWO အုပ်စုက အပြစ်တင်လိုက်ပြီး ဒေသခံလွှတ်တော်အမတ်ကိုလည်း ဒေသတွင်း ဘိန်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းအား အဓိကကာကွယ်ပေးနေသူဟု စွပ်စွဲထားသည်။ ယခင် ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် ဦးကျော်မြင့်က သူ့အားမဲထည့်ပါက အဟန့်အတားမရှိ ၅ နှစ် ဘိန်းစိုက်ခွင့်ရမည်ဟု နမ့်ခမ်းမဲဆန္ဒရှင်များ ပြောကြားစည်းရုံး ခဲ့ကြောင်း ရွာသားတစ်ဦးက ထုတ် ဖော် ပြောဆိုခြင်းကို PWO အုပ်စုက ကိုးကားတင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးကျော်မြင့်သည် မနှစ်က ရွေးကောက်ပွဲတွင် တပ်မတော်အစိုးရကိုယ်စားပြု ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ အမတ်အဖြစ် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပလောင်တောင်သူများသည် မူလက လက်ဖက်စိုက်ပျိုးသူများဖြစ်သော်လည်း တပ်မတော်အစိုးရ ကြီးမားစွာ ထိန်းချုပ်ထားသော လက်ဖက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကျဆင်းလာမှုကြောင့် ၎င်းတို့ဘဝ ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက် ဘိန်းကို မဖြစ်မနေ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးကြရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအတောအတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု ကြံ့ကြံ့ခံ ရှင်သန်နိုင်ရခြင်းမှာ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ စစ်တပ်၊ ရဲနှင့် ပြည်သူ့စစ်များက အခွန်များ၊ ဆက်ကြေးများ ကြီးကြီးမားမား ကောက်ယူ ကာ ခွင့်ပြုထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထိုဒေသခံ လွှတ်တော်အမတ်၏ တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စများကို ဗဟိုအစိုးရက ခွင့်ပြုထားခြင်းမှာ တိုင်းရင်းသား သူပုန်များအား နှိမ်နင်းသည့် စစ်ဆင်ရေးတွင် အပြန်အလှန် အကူအညီရရှိရန် ဖြစ်သည်ဟု PWO အုပ်စုက ယုံကြည်လျက် ရှိသည်။ ပဋိပက္ခပြဿနာများ ဖိစီးနေသော ရှမ်းပြည်နယ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် အာဏာအကြား ဆက်စပ်ပတ်သက်မှုများကို ဤကိစ္စက မီးမောင်းထိုးပြနေသည်ဟု ၎င်းအုပ်စုက ပြောကြားသည်။
မြန်မာအစိုးရသည် တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေးကို ဖိနှိပ်နှိမ်နင်းရာတွင် ဒေသခံပြည်သူ့စစ်များအပါအဝင် တပ်မတော် အဖွဲ့အစည်းအပေါ်တွင် မှီခိုရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် အစိုးရနောက်လိုက်ပြည်သူ့စစ်များ၊ လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများ ဘိန်းကုန်ကူးမှုဖြင့် အသက်ရှင်နေခြင်းကို ခွင့်ပြုထားကြောင်း ၎င်းတို့က ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
မြန်မာအစိုးရ တင်ပြသော ကိန်းဂဏန်းများကိုသာ အခြေပြုလျက်ရှိသော ကုလသမ္မဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ရာဇဝတ်မှုခင်းဌာန UNODC အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးအခြေအနေကို ပိုမိုလွတ်လပ်စွာ လေ့လာမှုပြုလုပ်ရန် ယခု ပြည်နယ်တစ်ခုထဲသာ လေ့လာထားသော PWO နောက်ဆုံး အစီရင်ခံစာက လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ UNODC သည် အစိုးရ၏ ကိန်းဂဏန်းများကိုသာ မှီခိုအားထားနေခြင်းကြောင့် ပကတိ အခြေအနေကို မမြင်နိုင်တော့ဘဲ ပိုမိုဆိုးရွားလာနေသော မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကို ဖြေရှင်းရာတွင် စွမ်းရည်ကျဆင်းလာလျက်ရှိသည်။
မြန်မာအစိုးရသည် အနိမ့်ဆုံးအနေနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဘိန်းစီးပွား လုပ်ငန်းကို ကာကွယ်ပေးမှုအတွက် အပြစ်ရှိသော စစ်ဖက်၊နယ်ဖက် တာဝန်ရှိသူ အရာရှိများကို အရေးယူရန် အဆင်သင့်ရှိနေရမည့်အပြင် ဘိန်းစိုက် တောင်သူများ ဘိန်းအစားထိုးသီး နှံစိုက်ပျိုးခြင်းကို အားပေးမြှင့်တင်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။
ယခုအခါ မူးယစ်ဆေးဝါးလက်သည်တရားခံ မိစ္ဆာများအား မျက်စိမှိတ် မသိချင်ယောင်ဆောင်ခြင်းအစား လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အန္တရာယ် ကြီးသော မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် လူငယ်ထုပစ်မှတ်ထား စီမံချက်များကို တာဝန်သိသိဖြင့် ဆောင်ရွက်သင့်သည့် အချိန်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်သည်။
တရုတ်-မြန်မာ ပူးပေါင်း၍ အလတ်စားရေအားလျှပ်စစ် တည်ဆောက်မည်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ ဒီဇိုင်းဌာနတို့မှ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလတ်စား ရေအား လျှပ်စစ် တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ လယ်/ဆည် ဝန်ကြီးဌာနမှ တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်သည့် ဆည်တာတမံ ၃ ခုတွင် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း စက်ရုံများတည်ဆောက်နိုင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံ ဒီဇိုင်းဌာနမှ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးရေးအတွက် ပြီးခဲ့သည့်လက သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရန် စီစဉ်နေသည့် ရေလှောင်တမံများမှာ မြန်အောင်မြို့အနီးရှိ ကညင်ရေလှောင်တမံ၊ ဖောင်ကြီးမြို့ အနီးရှိ ငမိုးရိပ်ရေလှောင်တမံနှင့် သာယာဝတီမြို့အနီးရှိ သုံးဆယ်ရေလှောင်တမံတို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်း ရေလှောင်တမံများ တည်ဆောက်ပြီးစီးသွားပါက တည်တာတမံတစ်ခုစီတွင် နှစ်မဂ္ဂါဝပ်ခန့် စက်နှစ်လုံးစီ တပ်ဆင် တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ တည်ဆောက်နိုင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံမှ အကူအညီပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် တရုတ်-မြန်မာ ပူးပေါင်း၍ တည်ဆောက်မည့် အလတ်စားရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း၌ လက်ရှိအချိန်တွင် တရုတ် ယွမ်သန်း ၂၆၀ ခန့် ကုန်ကျမည်ပာု သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တည်ဆောက်ပြီး ဆည်တာတမံများမှ ဆည်ရေပေးဝေခြင်းအပြင် ရေအားလျှပ်စစ်ကိုပါ ပူးတွဲ ထုတ်လုပ်သွားရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ဒီဇိုင်းပုံစံများ ရေးဆွဲခြင်းကို China Water Resources Beifang Investigation Design and Research ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ် တည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းကိရိယာများကို တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ အကူအညီပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ထိုသတင်းအား 7day News Journal တွင်ဖော်ပြထားပါသည်.။
ဇတ်ဆရာ အလိုကျ ဦးကျော်ဆန်း ရဲ့ တခန်းရပ် ဇတ်သိမ်းခန်း....
ထို သတင်းအရ ဆိုရင်တော့ဖြင့် ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းမှာ ဇတ်ဆရာ အလိုကျ တခန်းရပ်ပြဇတ် ရဲ့ ဇတ်သိမ်းခန်း အပြီးတိုင် သွားပြီးဟု ယူဆရပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, November 02, 2011 Links to this post
ကလေး ငါးယောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော မိဘနှစ်ပါးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ပခုက္ကူမြို့ ရွှေ ချောင်း ရေ လျှပ်တစ်ပြက် ရေကြီး စဉ်သားသမီး ငါးဦး ရေထဲ သို့မျှော်ပါဆုံးရှုံးခဲ့သော အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် ကလေးများ၏ မိဘ များဖြစ် သောဦးဇော်ထွန်း (၃၈နှစ်)နှင့် ဒေါ်ပပစိုး(၃၃နှစ်)တို့အား အောက်တို ဘာ ၂၄ရက်တွင် တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ထားသည်များမှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြ လိုက်ပါသည်။ သားသမီး ခြောက်ဦး ရှိသော ဒေါ်ပပစိုးနှင့် ဦးဇော်ထွန်းတို့ မှာ အငယ်ဆုံးကလေး ငယ် တစ်ဦး သာ ကျန်ခဲ့ပြီး ငါးဦးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ချောင်းရေကျတဲ့ညက အဖြစ်အ ပျက်ကို ပြန်ပြောပြပေးပါလား။
ဒေါ်ပပစိုး- တစ်ညလုံး ကလေး တွေရော ကျွန်မတို့ရော မအိပ်နိုင် ဘူး ။ မနက်မိုးလင်းခါနီးမှ အိပ်ပျော် သွားတာ။ အိမ်နီးနားချင်းတွေက နှိုးမှ ကြည့်လိုက်တော့ ချောင်းရေ တွေက စီးနေပြီ။ ချောင်းအလယ် မှာရှိတဲ့ အိမ်အမြင့်ကြီးတစ်လုံး ပေါ်ကို ကျွန်မရော ကလေးတွေ ရော မနက် ၅ နာရီလောက်မှာ ပြေး တက်ခဲ့တယ်။ မနက် ၆ နာရီ လောက်ကျတော့ အိမ်ကြီးကို အနောက်က ရေစီးထဲမျောလာ တဲ့ အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုက ဝင်တိုက်တော့ အိမ်ကြီးလဲသွား ပြီး ကလေးတွေ ချောင်းရေထဲပါ သွားတော့တာပဲ။
ချောင်းထဲမှာ ဘယ်အချိန်လောက် အထိ အစ်မကလေးတွေနဲ့ အတူတူရှိနေခဲ့သလဲ။
ဒေါ်ပပစိုး- ၆ နာရီလောက်အထိ ပါပဲ။ ကလေးတစ်ယောက်ကိုချီ ထားပြီး ကလေးတစ်ယောက်ကို လက်က ဆွဲထားတာ။ လှိုင်းပုတ် လိုက်တော့ အကုန်လုံး လွင့်ကုန် တယ်။ အင်္ကျီစတွေ လှမ်းဆွဲလိုက် ပေမယ့် မမီတော့ဘူး။
ကလေးတွေနဲ့ ကွဲပြီးနောက်ပိုင်း လွတ်မြောက်လာပုံလေးပြောပေး ပါဦး။
ဒေါ်ပပစိုး -ကျွန်မရေထဲ မျာသွားပြီး ၊ သစ်ပင်တွေကြားရောက်လုက်၊သဲတွေပါးစပ်ထဲဝင်လိုက်၊ရေတွေ ဝင်လိုက်နဲ့ ပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက် ဖြစ်နေတာ။ ကြိုးတစ်ချောင်းကို တွေ့လို့ လှမ်းဆွဲပြီးတော့ ကမ်း ပေါ်တက်လာရတယ်။ ကမ်းစပ် မှာ သီလရှင်ဆရာလေးတွေက အ၀တ်တွေ ပေးတယ။် အဝတ် အစားတွေလည်း မပါတော့ဘူး။
ကလေးတွေက ဘယ်အရွယ်တွေ ရှိပြီလဲ။
ဒေါ်ပပစိုး -သားအကြီးက ၁၈ နှစ် ၊ ဒုတိယသမီးက ၁၂နှစ်၊ သားအ ငယ်လေး သုံးယောက်က ငါးနှစ်၊ သုံးနှစ်နဲ့ နှစ်နှစ်ရှိပြီ။
ကလေးတွေ ပြန်လာမယ်လို့မျှော် လင့်သေးလား။
ဒေါ်ပပစိုး - အကြီးဆုံးသားနဲ့သမီး ကိုတော့မျှော်တယ်။ ပြန်လာ မလားလို့။ အငယ်လေးတွေကို တော့ မမျှော်လင့်တော့ဘူး။ အခု ထိတော့ အလောင်းတွေ မတွေ့ သေးဘူး။ ငိုရလွန်းလို့လည်း မျက် ရည်တွေ မထွက်တော့ဘူး။
ကလေးတွေအတွက် ကောင်းမှု ကုသိုလ်ပြုဖို့ အစီအစဉ်ရှိလား။
ဒေါ်ပပစိုး- ကျွန်မတို့ကို လာလှူ တာတွေထဲက ဖယ်ပြီး ပြန်လှူပြီး သူတို့ ဘဝကူးကောင်းအောင် အမျှပေးဝေပါတယ်။
ကလေးတွေရဲ့ ဖခင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဘယ်လိုခံစားရပါလဲ။
ဦးဇော်ထွန်း- ယောကျာ်းတစ် ယောက်ဖြစ်နေတော့ မျက်ရည် တော့မကျဘူး။ ခံစားရတာက တော့ ရင်ကွဲမတတ်ပါပဲ။
အခုလို ဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူး တင်ပါ တယ်။၄င်းအင်တာဗျူး 7DAY JOURNAL တွင်ဖော်ပြထားပါသည်.။
သုံးနှစ်ဝန်းကျင် ကလေးတစ်ဦး ဗဟန်း၃လမ်းထိပ်တွင်ကောက်ရ
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ရွှေတိဂုံစေတီတော် အနီး ဗဟန်း ၃ လမ်းထိပ်၌ သုံးနှစ်ရွယ်ကလေးတစ်ဦး ကောက် ရခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ “ကလေးကား လမ်းဖြတ်ကူး
ခါနီးကို မိန်းမတစ်ယောက် က အော်ပြောတော့မှ ပြေးဆွဲထားပြီး လမ်းထိပ်ဆိုင်မှာ ခေါ်ထား တာ။ ညနေအထိလာရှာတဲ့လူလည်းမတွေ့တာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းနဲ့ရပ်ကွက်ရုံးကို သွားအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်” ဟု ကလေးအား တွေ့ရှိထိန်းသိမ်းထားသူ ဗဟန်း ၃ လမ်းမှ ကိုဝေလွင် ကဆိုသည်။ ကလေးငယ်အား သက်ဆိုင်ရာသို့အပ်နှံရာ ထိုရက်တွင် မိန်းကလေးလူပျောက်တိုင်ကြားမှုသာရှိပြီး ထိုကလေးအား လူပျောက်တိုင်ကြားမှု မရှိသေးသဖြင့်တွေ့ရှိထားသူက ထပ်မံ ထိန်းသိမ်းထားရန်ဟုဆိုသဖြင့် ဗဟန်း၃ လမ်းတွင် ကွမ်းယာဆိုင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ကိုဝေလွင်နှင့် အခြားတစ်ဆိုင်တို့က ဆက် လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့၇ပြီး ယခုချိန်တွင် ပ၇ဟိတ ဂေဟာတစ်ခု သို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါကလေးမှာ အသက်သုံးနှစ်ဝန်းကျင်ရှိ ယောကျာ်း လေးဖြစ်ကာ မိဘအမည်နှင့်သူ၏အမည်တို့ ကိုမေးမြန်းမရ သော်လည်း ကျန်သည့်ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွင် သွက်လက်ချက် ချာရှိပြီး ပြောဆိုရာ တိုင်းရင်းသားသွေးစပ်သည့်ပြောဆိုဟန် များရှိကြောင်း သိရသည်။ကလေးပျောက်ဆုံးနေသူများသည် ကေ ဝိုလေငွ် (ဗဟန်း ၃လမ်း )၊ ကိုဝေယံ(ဖုန်းး -ဝ၉ ၄၉၃၁၁၁၃၉) နှင့် ဗဟန်းမြို့နယ် ရဲစခန်းတို့သို့ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်သည်ဟု 7Day News Journal တွင်ဖော်ပြပါရှိပါသည်.။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိမ်မြုပ်နေတဲ့ သူရဲကောင်းတွေပါ
(IPS သတင်းဌာနမှ၊ 27 Oct 2011 ရက်စွဲပါ၊ Christian Papesch ၏ "Political Prisoners Are Burma's Unsung Heros" ကို yangonchronicle မှ ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်)
မြန်မာအစိုးရက အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အကျဉ်းသား ၆၃၅၉ ဦးအား လွှတ်ပေးမည်ဟု ကြေညာခဲ့ခြင်းသည် စံချိန်စံနှုန်း ပြည့်မီမှု မရှိသည့် လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းတစ်ခုကို ဖော်ကျူးလိုက်နိုင်သည်။ သို့သော်ခန့်မှန်းခြေ ၅၀၀ မှ ၂၀၀၀ အထိရှိသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ဦးရေထဲမှ မည်၍မည်မျှ လွတ်မြောက်ခွင့်ရရှိမည်ဟူသော ကိစ္စမှာ မသေချာ မရေရာဖြစ်နေဆဲပင်။ယင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာပြီး
နောက်တစ်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဟု နာမည်ပြောင်းလဲထား သည့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀ ခန့်အား ဗွေဆော်ဦး လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ယင်းနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၀၀ ခန့်တွင် အစိုးရဝေဖန်ရေးသမားနှင့် စွယ်စုံရ ဟာသအနုပညာရှင် ဇာဂနာ ခေါ် ဦးသူရလည်းပါဝင်လာသည်။ ၎င်းသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသသို့ ကျရောက်ခဲ့သော နာဂစ် ဆိုက်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြောင့် အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ဖြစ်သူ ဒုက္ခသည်ပေါင်းများစွာကို ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုစဉ်က စစ်အစိုးရအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့အတွက်ကြောင့် ၅ လခန့်အကြာတွင် ၎င်းကိုအစိုးရက ပြည်သူများအတွင်း မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၅၉ နှစ် ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာမှ တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားသူများနှင့် နယူးယောက်အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (HRW) တို့က မြန်မာအစိုးရ၏ ကနဦးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးမှုအပေါ် ယေဘုယျအားဖြင့် အသိအမှတ်ပြု ကြိုဆိုခဲ့ကြသည့်တိုင် ကျန်ရှိနေသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများနှင့် ပတ်သက်သည့် ဝေဖန်မှုများကား ဆက်လက်ထွက် ပေါ်နေဆဲပင် ဖြစ်သည်။
"လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေအတွက်တော့ အခုလို လွှတ်ပေးလိုက်မှုဟာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အဆင့်တစ်ခုလို့ ပြောရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကြီးမားတဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အရ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အစိုးရအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်" ဟု HRW အဖွဲ့၏ အာရှရေးရာ ဒုတိယဒါရိုက်တာ Elaine Pearson က IPS သတင်းဌာနသို့ပြောကြားသည်။
"တကယ်တမ်းပြောကြစတမ်းဆိုရင် ဒါဟာ အင်မတန်သေးငယ်တဲ့အဆင့်တစ်ခုပါပဲ။ အဲဒီ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေဆိုတာ စစ်တပ်အတွက် နိုင်ငံရေးကစားဖို့ ဓားစားခံတွေ မဟုတ်သလို အလျှော့အတင်းလုပ်ဖို့ အလေးပြားတွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အားလုံးဟာ မတရား အကျဉ်းချ ခံခဲ့ကြရတာပါ"
ဘန်ကောက်အခြေစိုက် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်သော Jeanne Marie Hallacy တင်ဆက်သည့် "Into the Current" အမည်ရ မှတ်တမ်းတင်ဇာတ်လမ်းတွင် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်လက်အောက်သို့ရောက်ရှိခဲ့သော မြန်မာ နိုင်ငံတွင်းမှ အဆိုပါ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့၏ ဘဝအကြောင်းကို သရုပ်ဖော်ထားသလို နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေး အခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုလည်း ဖော်ကျူးထားသည်။
"ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကစိန်ခေါ်မှုကတော့ ကျွန်မတို့မှတ်မိသမျှအတွေ့အကြုံတွေအပေါ် အမှီပြုရမယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ သိထားတယ်ဆိုတဲ့ အချက် ပါပဲ" ဟု Jeanne Marie Hallacy က IPS နှင့် ပြုလုပ်သော အင်တာဗျူးတွင် ပြောကြားသည်။
"အကျဉ်းချခံရတဲ့ သူတွေထောင်ထဲမှာ သူတို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အင်မတန်နက်နက်နဲတဲ့ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးတွေ ပြန်လည် ဖြစ်ပေါ် စေလာမယ့် နည်းလမ်းရှာရတာဟာ ကျွန်မတို့အတွက် စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ တကယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကို လက်တွေ့ကျကျ မျက်မြင် တွေ့ရတာမျိုး မပါဘဲလုပ်ရတာမို့ပါ" ဟု သူမက ရှင်းပြသည်။ သို့သော် ယခုလို လက်တွေ့မျက်မြင် အတွေ့အကြုံများ နည်းပါးစွာဖြင့် ရိုက်ကူးခဲ့မှုကပင် Into the Current ဇာတ်လမ်း၌ ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်သော၊ ထိတ်လန့်စရာကောင်းသော သဘောသဘာဝများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ယင်းဇာတ်ကားကို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်အပေါ်မူတည်၍ရိုက်ကူးခဲ့ရာ ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်သော စစ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေး အကြမ်းဖက်မှုမှာ ပေါ်လွင် လှသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အကျဉ်းထောင်အသီးသီးတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအနက် ကိုသက်မှူး ဆိုသူလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်(ABFSU) ၌ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ ABFSU သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ဒီမိုကရေစီရေး လူထုအုံကြွမှုကြီး ဖြစ်ပေါ်အောင် လှုံ့ဆော်ခဲ့သည့် အဖွဲ့တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
"ထောင်ထဲမှာတုန်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ် ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသိကြဘူး။ ကျွန်တော်လည်း ဒီထောင်ထဲကနေ အသေထွက် ရမလား၊ အရှင်ထွက်ခွင့် ရမလား ဆိုတာမသိဘူး" ဟု ကိုသက်မူးက၎င်း၏ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြသည်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအများစုအတွက် တစ်နေ့လျှင် ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာသာမက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ပြစ်ဒဏ်ပေးရန် ထောင်တွင်းအမိန့်ထုတ်မှုများ ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် ဒါရိုက်တာJeanne Marie ၏ Into the Current အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြသော သတင်းစာဆရာများသည်လည်း ပြင်းထန်သော ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် နေ့စဉ် ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရသည်။
"သတင်းစာဆရာတွေနဲ့ မီဒီယာတွေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ရပ်တည်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါပဲ" ဟု ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် နောက်ပိုင်းမှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ မရရှိခဲ့သော ဒါရိုက်တာ Jeanne Marie ကဆိုသည်။ "သတင်းတစ်ပုဒ်ရေးမိတဲ့အတွက် ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ်ထိ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ မြန်မာသတင်းစာဆရာတွေ ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီလို အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ သတင်းစာဆရာတွေ အပေါ် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ သတင်းတွေလည်း ကျွန်မတို့ ရထားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မြေအောက်သတင်းကွန်ယက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေရရှိဖို့ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံကြရတာပါ"
အဆိုပါ အကြောင်းတရားကြောင့် Jeanne Marie ၏ Into the Current ဇာတ်လမ်းတွင် ၁၉၉၀ ပြည်နှစ်အတွင်း သူမရိုက်ကူးခဲ့သော ပုံရိပ်များကို အများဆုံး အသုံးပြုထားရသည်။ မျက်မှောက်ခေတ်နှင့် ပတ်သက်သော မြင်ကွင်းများကိုမူ လျှို့ဝှက်စွာရိုက်ကူး ရယူထားသော မှတ်တမ်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကြေညာချက်များ၊ မိသားစုဝင်များ၏ ဓာတ်ပုံများ၊ စာများနှင့် ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ဖူးသူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ကိုယ်တိုင်သီဆိုထားသော သီချင်းများကို ထည့်သွင်းထားသည်။ "လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို လူတွေကပြန်ပြောပြတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ ပါတယ်။ ဖခင် သို့မဟုတ် မိခင် ဖြစ်သူတွေ၊ သိုမဟုတ် ညီအကို မောင်နှတွေ ဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရသူတွေပါပဲ"
"တကယ်တော့ ကိန်းဂဏန်းတွေကြောင့် အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေရတာပါ" ဟု သူမက အသေးစိတ်ရှင်းပြရန် အစချီလိုက်သည်။ "တကယ်လို့ ရှင်တို့အနေနဲ့ စာရင်းဇယားပေါ်က ကိန်းဂဏန်းတွေကို ကိုးကားပြီး ပြောနေကြမယ်ဆိုရင် အများစုအတွက် ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ ရှင်တို့ အနေနဲ့ သူရဲကောင်းတွေဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အနည်းငယ်နဲ့ သူတို့ရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိအပေါ် အလေးအနက် အာရုံစိုက်ကြဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့သူ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုပြော ဆိုရာ ရောက်ပါတယ်" ဟု သူမကဆိုသည်။
Into the Current ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သော မြန်မာနှင့်ပတ်သက်သည့် အခန်းတော်တော်များများမှာ အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့သော်ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံး အဆိုးမြင်သည့်သဘောမျိုး အပြည့်အဝ လွှမ်းခြုံထားခြင်းတော့ မရှိပေ။ နောက်ဆုံးခန်းတွင် ဇာတ်ဆောင် ဘိုကြည် (ယခင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း၊ လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်နေထိုင်နေသူ) အနေဖြင့် သူ၏ဇနီးနှင့် သမီးဖြစ်သူတို့နှင့် ပြန်လည် ဆုံဆည်းခွင့် ရရှိပုံကို ရိုက်ကူးထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏ မိသားစုများအနေဖြင့် ပုံမှန်ဘဝမျိုး ပြန်လည်မရရှိသေးသည့်တိုင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း ကောင်းမွန်သောအနာဂတ်တစ်ခု ထွက်ပေါ် လာနိုင်ခြေရှိ သည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်မျိုးတော့ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
"အစိုးရသစ်ရဲ့ ပြဿနာက သူရဲ့ဗျူရိုကရေစီယန္တရားက အင်မတန်နှေးကွေးလေးလံပြီး အရည်အသွေး မရှိသေးတာပါပဲ။ သူတို့ ပြောင်းလဲလာမယ့် အချိန်ကို ကျွန်တော်တို့စောင့်နေကြပါတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့ပြောင်းလဲပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အားလုံး မြန်မာပြည် ပြန်သွားချင်ကြမှာပါပဲ" ဟု ကိုသက်မှူးက ရှင်းပြသည်။
မစ္စ Elanie Pearson ကမူ အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင် ဒုတိယအကြီးဆုံးအဆင့်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ခရီးရှည်ကြီးနှင်ရဦးမည်ဟု ရှုမြင်သည်။ "ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဆိုးရွားဆုံး အခြေအနေမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ပါဝင်ပါတယ်။ လက်ရှိ အစိုးရသစ် အနေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင် ကြိုးစား လုပ်ကိုင်နေတာမျိုး ကျွန်မတို့မတွေ့ရသေးပါဘူး" ဟု သူမက ဆိုသည်။
Into the Current တွင် ထပ်လဲလဲရည်ညွှန်းဖော်ပြထားသည့် ဇာတ်သရုပ်လည်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရိုးရှင်းဆုံးသော မျှော်လင့်ချက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူမ၏ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတွက် အကြမ်းမဖက်သော နည်းလမ်းဖြင့် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုများပင် ဖြစ်သည်။ "ဇာတ်လမ်းထဲမှာ အဓိကပေးထားတဲ့ Message ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အတိုက်အခံတွေရဲ့လမ်းစဉ်က အကြမ်းမဖက်သော လမ်းစဉ် ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ" ဟု ဒါရိုက်တာ Jeanne Marie ကဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချမခံခဲ့ဖူးသော်လည်း နှစ်ပေါင်း ၂၁ နှစ်တွင် ၁၅ နှစ်တာကြာမျှ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။ ယင်းကိစ္စသည်ပင် နိုင်ငံရေးသမား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် မြန်မာလူမျိုးအများစုအကြား ဖိနှိပ် ချုပ်ခြယ်မှုများကို တွန်းလှန်သော အတိုက်အခံအင်အားစု၏ ပြယုဂ်တစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့သည်။
"နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၀၀ ကျော်ကို လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်တာကို ကျွန်မတို့ တွေ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ် ၁၈၀၀ ကျော် လွတ်မြောက်ဖို့ ကျန်နေပါသေးတယ်။ အဲဒီလို ကျန်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာ အစိုးရကို ဝေဖန်ပြစ်တင်မိလို့၊ အငြင်းပွားစရာ ဆောင်းပါးတွေ ရေးသားမိလို့၊ ဆန္ဒပြမှုတွေမှာပါဝင်မိလို့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တတွေဟာ ထောင်ထဲမှာ ရှိမနေသင့်ပါဘူး။ သူတို့တွေဟာ မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ပါဝင်ပတ်သက် ခွင့်ရရှိသင့်တဲ့သူတွေပါ" ဟု မစ္စ Elanie Pearson က နိဂုံးချုပ်ပြောဆိုသည်။
၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ရက်နေ့သည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျယ်ချုပ် မှ လွတ်မြောက်လာခဲ့သည့် တနှစ် တင်းတင်းပြည့်မြောက်သောနေ့ဖြစ်ပါသည်။ယင်းသို့ လွတ်မြောက်လာသည့် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည် က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုအောက်ပါ အစီအစဉ် အတိုင်းပြုလုပ် မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် တက်ရောက် ပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Mr Michael Posner နှင့် Sarah Burkley More သည် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီလူနာများဂေဟာကိုသွားရောက်ခဲ့
နိုဝင်ဘာလ ၁ရက်နေ့တွင် အမေရိကားမှ အမေရိကန်လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Mr Michael Posner နှင့် Sarah Burkley More ဆာရာဘာကလေမိုရ် သည် ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းရှိ မဖြူဖြူသင်း၏ အိတ်အိုင်ဗွီလူနာများစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာသို့ ညနေ သုံးနာရီခွဲခန့်တွင်သွားရောက်ကာ လူနာများကို အားပေးနှစ်သိမ့် လက်ဆောင်များပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
Mr Michael Posner သည် မဖြူဖြူသင်းအား ယခုကဲ့သို့ လူနားများကို ကူညီစောင့်ရှောက်ဖြစ်ခဲ့ပုံ ၊ လူနာအခြေအနေများနှင့် ဆေးဝါးအထောက်အပံ့များ လိုအပ်ချက်များကိုလည်း မေးမြန်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
“ပထမဦးဆုံးစတာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်ပါ ၂၀၀၂ မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနေ သင်တန်းပေးလိုက်တာကြောင့် အဓိကကတော့ အဲ့တုန်းက education ပညာရေးပေါ့ နောက်ပိုင်းကျတော့ အဲ့အချိန်ကတည်းက patient လူနာက ရောက်လာပြီးတော့ အကူအညီတောင်းလာကြတော့ ကုသမှုပိုင်းကလိုလာတယ် ဒီမှာကလူနာ နှစ်ရာနီးပါးရှိတယ် တစ်နေရာတည်း မဟုတ်ဘူး နေရာက နှစ်နေရာရှိတယ် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမှာရောပေါ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က မတူဘူး တစ်ချို့တွေ နှစ်နဲ့ချီပြီးနေရတာရှိတယ် လူ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရပေါ့ အနည်းဆုံးတော့ သုံးလ လောက်တော့ နေရတယ်” ဟု Mr Michael Posner၏ မေးမြန်းချက်ကို မဖြူဖြူသင်းမှယခုကဲ့သို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားမှ ကိုယ်စားလှယ်များလစဉ်လာရောက်ခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော အခွင့်အလမ်းဖြစ်ကြောင်း မဖြူဖြူသင်းအနေဖြင့် ၀မ်းသာကြောင်းနှင့် လူနာများအတွက်လည်း စိတ်မပူရန်လိုအပ်သလိုထောက်ပံ့ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်းကို အမေရိကားမှ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အလုပ်သမားလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး Mr Michael Posner မှ ပြောသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
“အခုလို ပြည်ပက လူတွေလာတာ ၀မ်းသာပါတယ် နောက်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းဘဲ လူနာတွေကို အားပေးစကားပြောသွားတယ် နှစ်သိမ့်ပေးကြတယ် နောက်စိတ်မပူဖို့ပေါ့နော် သူတို့ထောက်ပံ့နိုင်သလောက်တော့ ကူညီမယ်တဲ့ ပြီးတော့ လက်ဆောင်လည်းပေးသွားတယ် ဒီက လူနာတွေအတွက်ပေါ့ “ဟု မဖြူဖြူသင်းက ပြောသည်။
သတင်းများပြန်လည်ဝေမျှပေးသော မြစ်မခ မီဒီယာ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
အနုပညာကို စတင် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပြင်ဆင်နေသည့် ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ဦးကျော်သူ
နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဌတစ်ဦးဖြစ်သူ ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သော ဦးကျော်သူသည် လေးနှစ်ကြာမှိုတက်နေသော အနုပညာကို လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ဒါရိုက်တာအဖြစ် ပါဝင်ရိုက်ကူးဖန်းတီးခြင်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးကျော်သူထံမှ သိရသည်။
“ကျွန်တော် ဒါရိုက်တာအဖြစ်နဲ့ ၀င်ပြိုင်ဖို့ရှိတယ် ကျွန်တော်လေးနှစ်ကြာ မှိုတက်နေတဲ့ အနုပညာကို အကောင်အထည်ပြန်ဖော်ထုတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ် “ဟု ဒါရိုက်တာဦးကျော်သူ ကပြောသည်။
လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော် ပါဝင်ရခြင်းမှာ ယခင်ကဲ့သို့ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းမရှိခြင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီစနစ်အရ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရုပ်ရှင်ဖန်တီးရန် ဆန္ဒရှိခဲ့ကြောင်း ဦးကျော်သူက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
“ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရိုက်ကူးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လေ အခုဟာကလည်း လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဆိုတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ၀င်ပြိုင်နိုင်တယ် ပြီးတော့ ဆင်ဆာ မရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက် အရမ်းကောင်းတယ်” ဟု ဒါရိုက်တာအဖြစ်ဝင်ပြိုင်မည့် ဦးကျော်သူကပြောသည်။
ဦးကျော်သူ ရိုက်ကူးဖန်တီးထားချက်တွင် စစ်သားများနှင့် အခြားသော အရုပ်ပုံစံများ ပါရှိထားပြီး အနုပညာရှင်များ ပါဝင်ရိုက်ကူးထားခြင်းမရှိသေးကြောင်း နှင့် အနုပညာရှင်ညီအကိုများသာမက သာမာန်ပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း အဆိုပါပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြရန် တိုက်တွန်းလိုကြောင်းကို ဦးကျော်သူမှ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော် စာနယ်ဇင်းများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောပြခဲ့သည်။
“ကျွန်တော် အနုပညာကြေးပေးစရာမရှိလို့ ကျွန်တော့်ရိုက်ကူးရေးထဲမှာ အနုပညာရှင်တွေမပါပါဘူး ဒါပေမဲ့ စစ်သားတွေပါမယ် ကလေးစစ်သားမဟုတ်ပါဘူး ပြီးတော့ အနုပညာဆိုတာ လူတိုင်းမှာရှိတယ် အဲ့ဒါကြောင့် အနုပညာရှင်တင်မဟုတ်ဘူး အပြင်က လူတွေလည်း မိမိအနုပညာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ပါ ဒီလို ဒီမိုကရေစီကျတဲ့ ပွဲတော်မျိုးက လုပ်သင့်တယ်လုပ်ထိုက်တယ်လို့လဲ ကျွန်တော်မြင်တယ် ” ဟု ဒါရိုက်တာ ဦးကျော်သူက ပြောသည်။
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဌတစ်ဦးလည်းဖြစ်သူ ဦးကျော်သူသည် ၁၉၈၄ခုနှစ်တွင် အနုပညာလောကသို့စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းတွင် သံဃာများအား ဆွမ်းလောင်းခြင်းကြောင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ကို ရပ်နား ထားရခြင်းမှာ လေးနှစ်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
သတင်းမျာအား ပြန်လည်ဝေမျှ ပေးသော မြစ်မခမီဒီယာ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
သတင်းဝေမျှပေးသော မြစ်မခ မီဒီယာအားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, November 01, 2011 Links to this post
သရက်ထောင်အတွင်း အကျဉ်းသားအချို့ အဓမ္မရိုက်နှက်ခံရမှုများရှိနေခြင်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မှတ်ပုံတင်နိုင်ဖွယ်ကိစ္စ တုံ့ပြန်ချက်များ
“အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုကနေ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်တာကို ကျနော်တို့ကတော့ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်တယ်လေ။ ကျနော်တို့မြင်တာကတော့ နိုင်ငံရေးပါတီရယ်လို့ဖြစ်လာရင်တော့ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့၊ နိုင်ငံရေး
အာဏာ ရယူဖို့၊ နိုင်ငံရေးအာဏာ ရယူမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့လူထုအတွက် ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ကျနော်တို့က ဆောင်ကြဉ်းနိုင်မှာ ဖြစ်တာကိုး။ အထဲက ခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ ရှိတယ်၊ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် ကော်မတီဝင်တွေ ရှိတယ်။ မြို့နယ်အသီးသီးက ခေါင်းဆောင်တွေ ရှိတယ်။ အဲဒီလို အားလုံးရဲ့ သဘောတူဆန္ဒနဲ့အညီ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ အလေးအနက် ယုံကြည်တဲ့အတွက် တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတယ်မယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ကန့်ကွက်စရာမရှိဘူးလို့ ကျနော် ပြောချင်ပါတယ်။
“ကျနော်တို့အားလုံး တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်ကောင်းအောင် လုပ်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခြေခံကောင်းတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ် ရှိဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒါက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွှတ်ရမယ်။ နောက်ပြီးတော့မှ ရန်သူတွေရဲ့အပြုအမူတွေ ရပ်ဆိုင်းတဲ့အနေနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးလုပ်ရမယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပွဲဆိုတာ ပေါ်ရမယ်။ အဲဒါဆိုလိုရရှိရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရန်ရှာစရာမလိုဘဲနဲ့ အားလုံးကနေပြီးတော့ သွားလို့ရတဲ့ အနေအထားမျိုးပေါ့။ အဲဒီလိုဟာမျိုးကို အာမခံချက် အားလုံးကိုပေးတယ်ဆိုရင် အတုံ့အပြန် အနေနဲ့ ပြန်လည်တောင်းဆိုလာနိုင်တာက… ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျာ လောလောဆယ်တော့ ပါတီ မှတ်ပုံတင်ထားလိုက်ပါ။ ကျနော်တို့အားလုံး ကျေနပ်လို့ရအောင် ရွေးကောက်ပွဲလေးတော့ ၀င်ထားလိုက်ပါ။ သို့သော်လည်း ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးကို အပြင်မှာ ဆွေးနွေးပါ့မယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားတွေလည်း ပါသေးတာမဟုတ်ဘူး…ဆိုတဲ့ဟာမျိုး ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဆိုတဲ့ သူတို့ပြောပြောနေတဲ့ သူမနာကိုယ်မနာပေါ့ အားလုံးနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ အဲဒီအခြေအနေတွေ ဘာမှအာမခံချက် မရှိသေးဘဲနဲ့ ငါလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကို မင်းတို့အတင်းလုပ်ဆိုရင်တော့ ဒါက တဖက်သက်အနိုင်ကျင့်တာများ ဖြစ်မလားလို့ ကျနော်တို့က အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်မိတာပါ။”
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဟာ တရားမျှတမှု မရှိတဲ့အတွက် ပါတီကို မှတ်ပုံတင်ဖို့ စဉ်းတောင် မစဉ်းစားဘူးဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယတိပြတ် ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပနေတဲ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွေကနေ နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်ကို အတည်ပြုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ NLD ပါတီက မှတ်ပုံတင်ရေး မတင်ရေး စဉ်းစားချက် ထွက်ပေါ်လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေး ဥပဒေပြင်ဆင်ချက် မူကြမ်းကလည်း သမ္မတက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရင်တော့ ပါတီမှတ်ပုံတင် ဥပဒေအဖြစ် မကြာခင်မှာ ထွက်ပေါ်လာဖွယ်ရာလည်း ရှိနေပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, October 31, 2011 Links to this post
နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံလိုင်းများအဖြစ် ထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိသာ MRTV-4၊ Sky Net ရုပ်သံလိုင်းများနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ ရုပ်သံလိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည့် CCTV ရုပ်မြင်သံကြားတို့မှ ပူးပေါင်း၍ CCTV International ရုပ်သံလိုင်းကို အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှ စတင်၍ မြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြားတွင် စတင် ပြသနေပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
ယခုကဲ့သို့ မြန်မာ-တရုတ် ပူးပေါင်း၍ ပြန်ကြားရေးလုပ်ငန်း ကိစ္စရပ်များကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့သည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် မပာာဗျူပာာမြောက် ဆက်ဆံရေးအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
နောင်အနာဂါတ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် ပြန်ကြားရေးကဏ္ဍတွင် ပိုမို၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ပြီး ယခုထက် ပိုမို၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းမှုရှိသည့် ဆက်ဆံရေးကို တိုးပွားလာနိုင်ရန် ကြိုးစားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ယခုကဲ့သို့ ပြည်ပနှင့် ပူးပေါင်း၍ ရုပ်သံလိုင်းများ ထပ်မံတိုးချဲ့လိုက်သည့်အတွက် ကမ္ဘာနှင့်အဝန်း ဖြစ်ပျက်လျက်ရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ သိရှိနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း Sky Net ရုပ်သံလိုင်းဝယ်ယူထားသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာ-တရုတ် ပူးပေါင်း၍ ထုတ်လွှင့်သည့် CCTV International ရုပ်သံလိုင်းတွင် CCTV-4၊ CCTV-News၊ CCTV-9 Documentary ရုပ်သံလိုင်းတို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခပေး၊ အခမဲ့ ကြည့်ရှုခွင့်ရသော ရုပ်သံလိုင်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တရားဝင် စာရင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရေဘေးဒုက္ခသည်များ ဘလော့ဂါများကို အသိအမှတ်ပြု
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း မိုးကြောင့် ပခုက္ကူခရိုင်မှ ရေးဘေးဒဏ် ခံခဲ့ရသူများသည် အင်တာနက်ပေါ်တွင် သတင်းဓါတ်ပုံများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ တင်ပေးခဲ့သော ဘလော့ဂါလူငယ်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ဒေသခံများမှစုံစမ်းသိရှိရသည်။
အရပ်ဖက်အစိုးရ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း လာရောက်စဉ် အင်တာနက်ဝက်ဆိုက်များပေါ်တွင်း ဓါတ်ပုံများ တွေ့ရသဖြင့် ဓါတ်ပုံရိုက်သူများကို သတိထား ဖော်ထုတ်ရန် ညွန်ကြားခဲ့သည်ဟု လုံခြုံရေးများပြောကြောင်း အမှန်တွင် ဘလော့ဂါများ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်သဖြင့် လူအများ အဖြစ်မှန်ကို သိရှိရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပခုက္ကူမှ အသက်၂၅နှစ် အရွယ် ဘလော့ဂါ လူငယ်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
“ကျွန်တော် မိုးကုတ်ကျောင်းထဲ ဓါတ်ပုံ သွားခိုးရိုက်တော့ ဘယ်အင်တာနက်ကလည်း အဖွားကြီးတစ်ယောက်က မေးတယ် ပုလိပ်တွေ မလာခင် အမြန်ရိုက်လို့ ပြောတယ် အဖွားကြီးက အင်တာနက်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိပဲ ကူညီပေးနေတာ ရယ်ရခက်ငိုရခက်ပဲ”ဟု ၎င်း၏အတွေ့အကြုံကို ပြောကြားသည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၀ရက်နေ့ ရေကြီးပြီးနောက် ပခုက္ကူသို့ ဖုန်းများ ခေါ်ဆိုလို့မရကြောင်း စင်္ကာပူတွင် ရောက်နေသည့် သမီးမှ အင်တာနက် ပေါ်တွင် ဘလော့ဂါများ ရေးထားသည့် ဓါတ်ပုံများကိုကြည့်ပြီး ဖုန်းဖြင့်ပြောသဖြင့် ပခုက္ကူ သတင်းများကိုသိရှိရကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ တောင်ဒဂုံတွင် နေထိုင်သူ ပခုက္ကူဇာတိသားတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိင်ငံတွင် ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ သံဃာတော်များဆန္ဒပြမှု၊ နာဂစ်မုန်တိုင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ချိန်တို့တွင် လူငယ် ဘလော့ဂါများ ကြိုးစားမှုကြောင့် သတင်းများတက်လာပြီး အဆိုပါပုံရိပ်များ စီပွားရေးအကွက် မြင်သူများက စီဒီချပ်များဖြင့်ကူးပြီး ရောင်းချသဖြင့် အင်တာနက်ကို မသုံးတတ်သူများ မသိသူများပင် သတင်းပုံရိပ်များ တွေ့မြင်ခံစားရကြောင်း နိုင်ငံတကာတွင် ဘလော့ဂါများကို Citizen Journalist များဟု အသိအမှတ်ပြုထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေအရ ဆယ်စုနှစ်ချီသည့် ပစ်ဒဏ်များ ချမှတ်လေ့ရှိသည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည့်တို့တွေ့ဆုံ
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည့်တို့ အစိုးရသစ်လက်ထက် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံမှုအဖြစ် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ (ယနေ့) မွန်းလွဲ ၁ နာရီမှ ၁နာရီ၅၅ မိနစ်အထိ စိမ်းလဲ့ကန်သာ ဧည့်ဂေဟာ၌ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, October 30, 2011 Links to this post
၂၉-၁၀-၂၀၁၁ (၅၄)တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနေအိမ်တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖွဲ့အားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ခံတွေ့ဆုံ။
၂၉-၁၀-၂၀၁၁(စနေနေ့) ည ၇း၀၀ မှ ၈း၀၀ နာရီ အထိ တစ်နာရီ ခန့်ကြာ(၅၄)တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနေအိမ်တွင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာ မာတီ နာတာလေ ဂါဝါ အဖွဲ့အားဒေါ်အာင်ဆန်းစုကြည် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်.။
ဓာတ်ပုံ များအတွက် ကိုဆန်နီ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ချက်ခြင်းပင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြ...
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာအို၊ နီပေါ...
ဦးပိုင်ဆန်အ၀ယ်တော် ဆန်ဖိုးငွေ သိန်းထောင်ချီမရှင်း...
မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားမှ အထူး ကိုယ်စားလှယ်ေ...
ငွေတမျက်နှာတည်း ကြည့်သော ဆရာဆရာမများ တိုးပွားနေ (ေ...
အစိုးရစစ်တပ်က နို့မဖြတ်ရသေးသည့် နို့စို့အရွယ်ကလေးမ...
မာန်အောင်မြို့ နယ်တွင် ပိုစတာကမ်ပိန်းတစ်ခု လှုပ်ရှာ...
အကြွေးရှင်နဲ့ ဥက္ကဋ္ဌပေါင်းပြီး လယ်ယာမြေကို မတရားသိမ်...
တရုတ်-မြန်မာ ပူးပေါင်း၍ အလတ်စားရေအားလျှပ်စစ် တည်ဆေ...
ဇတ်ဆရာ အလိုကျ ဦးကျော်ဆန်း ရဲ့ တခန်းရပ် ဇတ်သိမ်းခန...
ကလေး ငါးယောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော မိဘနှစ်ပါးနှင့် တွေ့...
သုံးနှစ်ဝန်းကျင် ကလေးတစ်ဦး ဗဟန်း၃လမ်းထိပ်တွင်ကောက...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိမ်ြ...
အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Mr Michael...
အနုပညာကို စတင် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပြင်ဆင်နေသည့် ရုပ...
နိုဝင်ဘာ ၁၄ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလံ...
၂၉-၁၀-၂၀၁၁ (၅၄)တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနေအိမ်တွင် အင်ဒို...